sida loo nadiifiyo qalabka musqusha ee matte madow
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida loo Nadiifiyo Qalabka Matxafka Musqusha ee Matta
2021 / 01 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 2667 0
Isbeddelada qurxinta guryaha ayaa la beddelaya mawjadaha sida isbeddellada qayb kasta oo nolosha ka mid ah, laga bilaabo moodada illaa timaha. Weli, waxaa jira waxyaabo xubno qurxin ah oo sannado badan ku soo jiray isbeddel aan calaamado joogsi lahayn. Qalabka musqusha ee Matte madow ayaa ka mid ah.
Matte madow waa isbeddel aad u caan ah oo ka socda guryaha ku yaal Maraykanka iyo adduunka oo dhan. Waxay leedahay muuqaal casri ah oo heer sare ah oo ay jecel yihiin milkiileyaasha guryaha fog iyo kuwa ballaaran. Dabcan, waxay umuuqataa kaliya sida ugufiican hadday nadaafad iyo nadiif ahaato. Sideed u ilaalin kartaa muuqaalkaas muddada-dheer?
In kasta oo isku-dhafka madoow ee matte-ku uu ka sahlan yahay in la ilaaliyo marka loo eego inta badan kulammada, haddana waxaa jira xeerar iyo tilmaamo la tixgelinayo. Tilmaamahan ayaa ku tusaya sida loo nadiifiyo qalabka musqusha ee matte madow oo wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad jadwalkaaga u ekaato mid cusub oo musqushaadu u ekaato mid raaxo leh.
Maxay muhiim u tahay in la nadiifiyo waxyaabaha gogosha ah ee Musqusha ee Matta?
Waxyaabaha Qiyaasta iyo Waxyaabaha Looga Baahan Yahay Nadiifinta Maaddooyinka Musqusha ee Madoow
Nadiifinta Qaybaha Gudaha ee Qalabkaaga Musqusha
Daryeelka Qalabkaaga Musqusha ee Madoow
1. Maxay muhiim u tahay in la nadiifiyo waxyaabaha gogosha ah ee Musqusha ee Matta?
Marka ay timaaddo jadwalkaaga dibedda, nadiifinta badanaa waxay ka caawin doontaa inay ilaaliyaan muuqaalkooda cusub-sanduuqa. Kaliya ma aha dhibcaha biyaha iyo haraaga inay kaa qaadaan waxyaabaha aad isku qurxinayso, laakiin qaar ka mid ah haraagaani waxay ka kooban yihiin kiimikooyin duugoobi kara dhammaadka. Nadiifinta iyaga si dhakhso leh ayaa kaa caawin doonta inaad ka hortagto waxyeelo waqti dheer ah oo ku timaad qalabkaaga.
In kasta oo taasi run ka tahay dibedda waxyaabahaaga, nadiifinta gudaha waxyaabahaaga ayaa xitaa ka muhiimsan. Tuubbooyinka iyo bulaacadaha si isku mid ah ayey u xirmi karaan, taasoo ka dhigeysa in jadwalkaaga muhiimka ah uu shaqeynayo. Xaalado badan, jadwal nadiifin oo fudud ayaa ka hortagi kara dhibaatooyinkaas.
Sidee Badanaa Loo Nadiifiyaa Qalabkaaga Matte Madoow
Dhamaanteen waxaynu leenahay nolol mashquul ah, markaa intee jeer ayaad u baahan tahay inaad waqti qaadato si aad u nadiifiso qalabkaaga? Nasiib wanaagse, nadiifinta bannaankooda way fududahay in lagu daro nadaafaddaada toddobaadlaha ah, iyadoo musqusha kasta ay qaadanayso shan daqiiqo ama wax ka yar.
Nadiifinta qalabkaaga 'aagga gudaha waxay qaadataa xoogaa daqiiqo oo dheeri ah, laakiin badanaa 15-20 daqiiqo waa badan yihiin musqusha oo leh qubeys iyo hal ama labo waaskadood haddii aad si joogto ah ula socoto fadhiyada nadaafadda. Kuwani waxay u baahan yihiin oo keliya in la nadiifiyo hal mar bil kasta ama si markaa loo xakameeyo qulqulka wasakhda.
Caqabadaha ugu waaweyn ee Nadiifinta Qalabka Musqusha ee Matta madow
Matte dhammeystirka madow waxay u muuqdaan kuwo raagaya, sidaa darteed ma ahan kuwo khiyaano leh in la nadiifiyo sida qaar kale oo dhammeeya. Weli, waxaa jira caqabado qaar oo maskaxda lagu hayo.
Joogtaynta Matte Finish
Qaar ka mid ah alaabooyinka nadaafadda waxaa loogu talagalay in aysan nadiifin oo keliya nadaafadda laakiin ay sidoo kale ku daraan dhalaal. Taasi waxay noqon kartaa wax aad ka dooneysid miisaskaaga, laakiin kuma xirna qalabkaaga musqusha madow. Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho alaab ka tagi doonta muuqaalka muuqaalka oo aan fiicnayn.
Ka qaadista Meelaha Biyaha
Faa'iidooyinka isku dhafan ee matoorka madow waa inaysan tusin dhibco biyo sida ugu fudud ee dhalaalaya sare sida chrome ama naxaas dhalaalaya. Meelaha biyuhu weli way muuqdaan, hase yeeshe, oo waxaad u baahan doontaa inaad ka nadiifiso markay jiraan.
Meelahaas biyaha waxay u muuqdaan kuwo ka khiyaano badan kana adkeysi badan boodhkaaga caadiga ah iyo walxaha kale ee isku dhejisan. Waxaa muhiim ah in loo nadiifiyo qaab awood u leh in laga saaro dhibcaha biyaha laakiin jilicsan oo ku filan si looga fogaado in la xoqo dhammaadka.
2. Waxyaabaha Qiyaasta iyo Waxyaabaha Loogu Talo Galay Nadiifinta Maaddooyinka Musqusha ee Madoow
Si aad u ilaaliso qalabkaaga musqusha madow ee u muuqda sida ugu fiican, waxaa jira tilmaamo muhiim ah oo la raaco, laga bilaabo alaabooyinka loo isticmaalo farsamooyinka gaarka ah. Raac tilmaamahan si aad uhesho jadwal aan dhib lahayn, oo aan waxyeelo lahayn.
Ha Isticmaal Xal fudud saabuun
Waxaa jira kiimikooyin badan oo waxyeelleyn kara madow madow, oo ay ku jiraan kiimikooyin badan oo laga helo badeecooyinka nadaafadda ganacsiga. Waa maxay habka ugu amniga badan uguna waxtarka badan ee lagu nadiifiyo isku-dubbaridka? Biyo saabuun fudud.
Buuxi baaldi ama biyo ku shub biyo kuna dar halbeegga saabuunta caadiga ah. Hubso inay tahay saabuunta saxanka pH-dheellitiran si aysan u ahayn aashitada. Isku qas, maraq ku dar biyaha saabuunta leh, una isticmaal inaad ku tirtirto qalabkaaga.
Ha Isticmaalin Acids
Waxaa muhiim ah inaad marwalba iska ilaaliso isticmaalka aashitada waxyaalaha iskujira ee madoow. Asiidhyadani way duugi karaan dhammaadka, xitaa haddii qalabku ka yimaado soo-saare tayo sare leh. Waxay ka tagi kartaa dabaqado aan dheellitirnayn oo dhammeystiran.
Waxa kaliya ee ka reeban ayaa ah inaad isticmaali karto khal marka aad ka saareyso baro biyo adag. Si kastaba ha noqotee, khalku waa inuu noqdaa mid aad u qasan oo waxaa jira xeelado loo isticmaalo si looga fogaado waxyeelo, taas oo aan ku sii qodidoono hoosta hoose.
U Isticmaal Maro Jilicsan Nadiifinta
Nooc kasta oo dhammeystiran ayaa horumarin kara xoqan, iyo matte madow waa mid ka reeban. Xitaa aaladaha nadaafadda ee guud sida burushyada, suufka wax lagu baaro, iyo isbuunyo qallafsan ayaa xoqin kara qalabkaaga. Qalabka ugu fiican ee la isticmaali karo inta aad nadiifinaysid qalabkaaga waa maro fudud oo microfiber ah.
Ha u isticmaalin Waxs ama waxyaabaha lagu nadiifiyo wakiilada wax buuxiya
Tani waa talo dad badani aysan ogaanin, laakiin waxay muhiim u tahay dhammaystirka gogosha. Soo-saareyaashu waxay abuuraan dhammaystir jilicsan iyagoo ku daraya shey-yar yar oo kuuskuusyo ah, burooyin, iyo dooxooyin. Markuu iftiinka dusha sare ku dhufto, qaab-dhismeedkan ayaa kala firdhiya iftiinka si aan u muuqan milicsasho adag sida aad ku arki lahayd dusha sare ee siman.
Waxs, nadiifiyeyaasha muraayadaha, iyo alaabooyinka kale qaarkood waxay ka kooban yihiin walxo buuxiya. Waxyaabahani waxay ku shaqeeyaan iyagoo buuxinaya cirifyada dusha sare si ay uga sii dhalaalaan. In kasta oo taasi ay ku habboon tahay muraayadaha iyo miisaska dhagxaanta, waxa ay abuuri doontaa iswaafaq la'aan xuubka dhammaadka madow - ama dhammaystir kasta oo jilicsan.
Si dhaqso ah u biyo raaci jadwalka
Markaad dharkaaga madow ku dhejisid saabuunta weelka, waa muhiim inaad biyo ku dhaqdid isla markaaba aadna u qalajiso. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka hortagto dhibco kasta oo biyo ah ama haraaga ah inaad dib udhacdo oo aad burburiso shaqadaada nadiifinta cusub. Xusuusnow inaad qalabka ku qalajiso maro jilicsan oo nadiif ah halkii aad ka isticmaali lahayd wax kasta oo qallafsan ama qoraal ah.
Ha Adeegsan Nadiifiyeyaasha Ujeeddada Guud
Markaad aragto shey loo calaamadeeyay inay yihiin ujeedo guud ama nadiifin dhamaanba musqusha, waxaad u maleyneysaa, "Taasi waa fududahay, waxaan ku isticmaali karaa wax kasta oo musqusha ku jira." Waxaa soo baxday in “wax waliba” ay yihiin xoogaa xad-dhaaf ah.
Waxyaabahani waxay had iyo jeer ka kooban yihiin asiidhyo, walxaha buuxiya, ama labadaba. In kasta oo maaddooyinkani ay ku fiican yihiin inta badan dusha sare, waxay dhaawici karaan dhammaystirka madow, gaar ahaan ka dib isticmaalka toddobaadlaha ah ee soo noqnoqda.
Ugu dambeyntiina, illaa aad ka ogaato dhammaan waxyaabaha ku jira nadiifiyaha oo aad hubto in midkoodna uusan wax khatar ah gelin, waxaa fiican in la caddeeyo. Saabuunta weelka ayaa shaqeysa nadiifinta qalabkaaga sidaa darteed looma baahna nadiifiyeyaal adag. Haddii aad isticmaasho alaab nadiifin ah, in kastoo, iska hubi inaad isla markiiba iska dhaqdid oo aad qalabka ku qalajiso biyo isla markiiba, sida ay tahay talo soo jeedinta isticmaalka saabuunta weelka.
Samee Nadiifinta Meelaha Dibadda Kahor Meelaha Gudaha
Marka dadku ka fekeraan nadiifinta qalabka musqusha, waxay ka fikiraan dusha sare marka hore. Meelaha gudaha waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah, in kastoo, haddii aad rabto inaad jadwalkaaga ku ilaaliso qaab wanaagsan oo uu si hagaagsan u socdo.
Waa muhiim in haddii aad ku nadiifineyso dusha sare iyo dusha isla maro, inkasta oo, marka hore nadiifi dusha sare. Meelaha gudaha waxay u nugul yahiin soo saarista kaalshiyamka iyo dhigaalka lime, wasakhda, iyo walxaha kale. Haddii aad u qaadid walxahaas dusha sare ee qalabkaaga, way xoqi karaan ama ku reebi karaan hadhaaga dhammaadka.
Ha dhaafin Xad dhaaf Adoo Isticmaalaya Khamri
Sidaan kor ku soo sheegnay, khalku waa aashitada kaliya ee ay tahay inaad ku isticmaasho dheecaankaaga madow, iyo kaliya duruufo gaar ah. Waxay si fiican ugu shaqeysaa sidii looga saari lahaa dhibcaha biyaha madax adag laakiin hubi inaad si taxaddar leh u raacdo nidaamkan.
Marka hore, qasi khalka. Xalka 50% khal iyo 50% biyo ayaa caadi ahaan waxtar leh oo ku filan si ay u shaqeeyaan weli jilicsan oo ku filan si looga fogaado waxyeellada. Dheji maro microfiber jilicsan xalkan una isticmaal inaad si tartiib ah u tirtirto dhibcaha biyaha.
Isla marka aad dhameysid biyo ku maydh qalabka si aad uga saartid wixii ku haray khal. Ugu dambeyntii, ku qalaji maro microfiber nadiif ah.
Ha Akhriso Tilmaamaha Soo Saarahaaga
Markaad ka shakisan tahay daryeelka qalabkaaga musqusha, had iyo jeer u jeeg tilmaamaha soo-saaraha. Buugaagta waxbarista badankood waxaa laga heli karaa khadka tooska ah haddii aadan xafidin nuqulkaagii hore.
Soosaarayaasha kaladuwan mararka qaarkood waxay isticmaalaan qalab iyo farsamooyin kala duwan si ay u abuuraan dhammaystirkooda madow Sababtaas awgeed, waxay sida ugu fiican u yaqaanaan noocyada alaabooyinka iyo farsamooyinka nadiifin doona qalabkooda si wax ku ool ah iyaga oo aan khatar u gelin waxyeello.
Qalabyada musqusha badankood waxay la yimaadaan nooc ka mid ah dammaanadda soo-saaraha sidoo kale, mararka qaarkoodna, ka leexashada tilmaamaha daryeelka soo-saaraha ayaa burin doonta dammaanaddaada. Marwalba way fiicantahay inaad ka nabad gasho intaan ka xumahay.
3. Nadiifinta Qaybaha Gudaha ee Qalabkaaga Musqusha
Sidii aan soo sheegnay, waa muhiim inaad ka ilaaliso meelaha ka baxsan musqushaada inay u ekaadaan sida ugu fiican, laakiin waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso gudaha gudaha waqti ka waqti sidoo kale. Taasi waxay u socotaa qalab kasta oo leh qaybo gudaha ah, sida bullaacadaha iyo qasabadaha leh aerators.
Nadiifinta Qalabka Fududeeyahaaga
Aerator waa gabal yar oo ku dhex jira qasabadaada una eg shaashad fiican. Waxay ka miiraysaa qaybo ka mid ah biyahaaga halka ay sidoo kale ku darayso hawo qulqulka biyaha sidaa darteed waa durdur ka macaan. Sida ay hawadu u shaqeyso sida haweyaha hawada, waxay soo saari kartaa xoogaa yar oo soo kicin ah sidaa darteed waxay ubaahantahay nadiifin waqti ka waqti si aysan u xanibin biyaha inay soo maraan.
1. Saar Aerator
Inta badan qasabadaha, aerator-ku wuxuu ku dhexyaala aalad yar oo dabacsan gudaha qasabadaada, oo sida caadiga ah ka soo baxaysa gunta hoose ee tuubada. Badanaa waad furi kartaa furka si aad uga saarto, in kastoo ay ugu fiican tahay inaad hubiso tilmaamaha soo saarahaaga si aad u hubiso.
2. Abuur Xalkaaga Nadiifinta
U isticmaal nooc isku mid ah xalka nadiifinta ee aad u isticmaashid dibedda madow ee matoorka: saabuunta saxanka iyo biyaha. Ku qas qashinkaaga ama baaldi waxaadna diyaar u noqon doontaa inaad baxdo.
Adoo isticmaalaya maro, bur xoq, isbuunyo, ama caday duug ah, ku nadiifi aerator-ka biyo saabuun leh si ay u dabciso qashinka iyo dhisitaanka. Si joogto ah u biyo raaci dhammaan, adoo ka saaraya jajabyada jilicsan. Kormeer muuqaal oo fudud ayaa kuu sheegi doona goorta hawadu nadiif tahay.
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa fursaddan inaad ku cusbooneysiiso gudaha qasabaddaada maaddaama aerator-ku uu inta badan xannibayo. Qaado caday duug ah qaar ka mid ah saabuuntaas saxarada iyo biyaha oo ku xoq gudaha tuubada. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad gasho dhowr inji si aad shaqo dhameystiran uqabato.
4. Beddel Aerator-ka
Qaybaha aerator ka dib dib isugu celi si isku mid ah sida ay ahaayeen markii aad ka saartay. Xor ayaad u tahay inaad hubiso tilmaamaha soo-saaraha haddii aadan hubin. Si fudud u fur iskushaandheynta la soo uruuriyay meeshiisii ​​oo waad dhamaysay.
Nadiifinta Musqusha Musqushaada
Bullaacad-biyoodka iyo bulaacadaha ayaa labaduba ah qaybo muhiim u ah qalabkaaga musqusha, waxayna u baahan yihiin nadiifin gudaha ah oo wanaagsan mar kasta oo joogto ah. Mararka qaarkood bulaacadu waxay kuu sheegaysaa inay tahay waqtigii adoo si tartiib ah biyo uga daadinaya ama ur xun yeelanaya. Xitaa haddii aadan arkin astaamahan, way ku caawinaysaa inaad nadiifiso bulaacadahaaga bil kasta ama si aad ugu sii tiirsanaato waxyaabaha xiraya.
1. Ka saar Qashinka
Xaalada godka gogosha, sida caadiga ah waxaad gacanta uga furi kartaa bartamaha qashin-qubka. Marka laga hadlayo qaar ka mid ah bulaacadaha qubeyska, waxaa jiri kara boolal yar yar oo aad u baahan tahay inaad kaga saarto shaandheeye fudud.
2. Ka saar Waxyaabaha Gudaha Ku Xidhan
Waxaad ka soo qaadan kartaa qalabka wax lagu xiro wax kasta oo ka mid ah keydka qalabka. Waa ul dheer, dhuuban, jilicsan, oo badanaa laga sameeyo balaastik, oo qabatooyin hareeraha ku hareeraysan si ay u qabsadaan timo iyo qashin kale oo wasakhda daadinaya. Kaliya dul istaag aaladdan godka bullaacadda oo kor u soo qaad si aad uga saarto wixii ku xirmay dhowrka cagood ee ugu horreeya godka bullaacadaha.
3. Nadiifi Hareeraha iyo Gudaha Bullaacadda
Markay dhamaato wixii isku qasan, isticmaal dharkaaga microfiber iyo biyo saabuun leh si aad ugu nadiifisid hareeraha qarka dheecaanka iyo gudaha dusha sare ee bulaacada. Ha iloobin inaad nadiifiso wasakhda dheecaanka ee aad asal ahaan ka soo saartay sidoo kale.
4. Dib isugu ururi Dheecaanka
Iyada oo bulaacadu nadiif tahay oo cusub tahay, waxaa la joogaa waqtigii dib loogu soo celin lahaa meeshiisa laguna raaxaysan lahaa godkaaga cusub ee nadiifka ah.
4. Daryeelka Qalabkaaga Musqusha oo Madoow ah
Matte qalabka musqusha madow runti waxay leeyihiin muuqaal raaxo iyo turxaan bixin. Weli, xitaa waxyaabaha ugu quruxda badan waxay umuuqan karaan hawo haddii aadan nadiif ka dhigin oo aadan si fiican u daryeelin. Raac tilmaamahan si aad u ilaaliso jadwalkaaga jilicsan ee madow oo u muuqda sida ugu fiican uguna fiicnaado qof walba sanadaha soo socda. Haddii aad wali u adeeganeyso jadwalka saxda ah, hubi hagaagyadeena iibsiga qalabka musqusha.
Matte Alaabada Qolka Musqusha ee Matte Lagu Taliyay
Qasnadda Musqusha ee Centerset oo ay ku Jirto Gole Bullaacadeed Matte Black
Matte Black Musqusha qasabad 4 Inch Centerset
Single Handle Musqusha Qasabada Matte Black
Tagqalabka musqusha ee madoow	Hore:: Muxuu Yahay Dhamaadka Ugu Caansan ee Qasabadaha Musqusha? Next: Sida loo doorto Qasabada Musqusha: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021
2021 / 05 / 13 1044
2021 / 05 / 09 766
2021 / 05 / 08 663
2021 / 02 / 04 735
2021 / 02 / 03 769
2021 / 02 / 03 857